အသက် ၂၈ နှစ် - PMO စွဲစွဲလန်းလန်း ၁၃ နှစ်။ Nofap ကငါ့ရဲ့စိတ်ကျရောဂါကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသပေးခဲ့ပြီးအခုငါဟာပျော်ရွှင်စရာလူတစ်ယောက်ပါ။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
အသက် ၂၈ နှစ် - PMO စွဲစွဲလန်းလန်း ၁၃ နှစ်။ Nofap ကငါ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသပေးခဲ့ပေမယ့်အခုငါဟာပျော်ရွှင်စရာလူတစ်ယောက်ပါ။
ဒီတော့ဒီမှာပါ။ ၂၈ နှစ်၊ အထီး၊ ဒုတိယ nofap သွားပါ။ ငါ ၉-၁၀ နှစ်အရွယ်ညတညမှာလူအများစုကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ ငါစိတ်ဝင်စားခဲ့ပေမယ့် fap မှစတင်ခဲ့ဘူး သူငယ်တန်းမှသူငယ်တန်းကို ၇ တန်းသို့ပို့သည်။ နောက်တဖန်ငါကြည့်ရတာပျော်မွေ့ပေမယ့်အဲဒါမှာရပ်တန့်။ အထက်တန်းကျောင်းတက်ပြီး ၁၅ နှစ်၊ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုနှင့် BAM ကိုကျွန်ုပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်နှင့်ချိတ်ဆက်မိခဲ့သည်။
ကျွန်တော့်အတွက် PMO သည် ဆက်လက်၍ abstinent အတွက်အထောက်အကူပြုရန်ထွက်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်၊ သို့သော်ငါသင်္ချာကိုလုပ်ခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သော ၁၃ နှစ်အတွင်း PMO ကအနည်းဆုံးအကြိမ် ၁၀၀၀၀ ရှိသည်။ မကြာသေးမီအချိန်အထိ (ဒီဇင်ဘာလတွင်ကျွန်ုပ်သည် Don Jon ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီး၎င်းသည် P နှင့် Ted ဟောပြောချက်ကိုရှာဖွေပြီးနောက် nofap တွင်) P သည်ငါ့ ဦး နှောက်အပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုမသိခဲ့ပါ၊
ငါဘာကြောင့်ဆက်လုပ်နေတာလဲ။ နံပါတ်တစ် * အကြောင်းပြချက်ကငါစိတ်ဓာတ်ကျတာကိုကူညီဖို့ဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ခင်ဗျားကိုပြောပြပါရစေ၊ အခုတော့ငါစိတ်ဓာတ်ကျတဲ့အခါတိုင်းဘာကြောင့်ငါလဲဘာအကြောင်းကြောင့်ငါရယ်ပြီးပိုကောင်းလာတယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားမိတယ်။ အခြေခံအားဖြင့်တော့ငါဟာတစ်နေ့ထက်ပိုပြီး (အဆိုးဆုံးမှာ) ဝမ်းနည်းပြီး / သို့မဟုတ်စိတ်ဓာတ်ကျနေသည်ဟုခံစားရခြင်းမရှိတော့ပါ။ ဒီတော့ဘာကြောင့်ဒီခရီးကိုရပ်တန့်မလဲ ဒါဟာနောက်ကျောကိုသွားဖို့လုံးဝသဘောမထားဘူး။ ကျွန်ုပ်၏ဆေးသည်တစ်ပတ်လျှင် ၅ ဆအနည်းဆုံး၊ အားကစားရုံသို့ ဝင်၍ အအေးမိသည့်နေရာဖြစ်လာသည်။
တစ်ဦးချင်းစီဖြတ်သန်းတစ်ရက်နှင့်အတူ ပို. ပို. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်ပြီးလေးစားရန်စတင်
ဒါဟာအများကြီးဒေါသထွက်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ယခုငါ့ကိုစိတ်ဆိုး။ အခြေခံအားဖြင့်အဲဒါဟာကျွန်မရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာမရှိတဲ့အရာဆိုရင်ငါ fuck ဆိုတဲ့မပေးဘူး။
ငါဆွဲဆောင်မှုကိုရှာဖွေအမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုမြင်သောအခါစိတ်ကိုမရှိတော့သူတွေကိုအရပ်မှတတ်၏။ ယခုတွင်ငါသည်ရုံသူမ၏ခန္ဓာကိုယ်ထက် ပို. များအတွက်သူမ၏တန်ဖိုးထားတယ်။
အားလုံးအားလုံးအတွက်, ကိုယ့်ကဒီအဟောင်းကိုအလေ့အထသို့ပြန်ကျမှာအားလုံးအဘယ်သူမျှမအကြောင်းပြချက်ကြည့်ပါ။ PMO နောက်ကြည့်မှန်ထဲမှာတည်သည်နှင့်နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်မပင်တော့ဘူးမြင်ရနိုင်ပါလိမ့် wont မျှော်လင့်ပါတယ်။
TL; ဒေါက်တာ: 13 နှစ် PMO စွဲ။ Nofap ကငါ့ရဲ့စိတ်ကျရောဂါကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသပေးခဲ့ပေမယ့်အခုငါဟာပျော်ရွှင်စရာလူတစ်ယောက်ပါ။
PS - ငါအရေးအကြီးဆုံးအချက်ကိုဖော်ပြရန်လုံးဝမေ့လျော့ကြ၏ သင်တို့ရှိသမျှနှင့်ဤအံ့သြဖွယ်အသိုင်းအဝိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ငါသည်သင်တို့ကိုယောက်ျားတွေမပါဘဲဤအမှုကိုပြုနိုင်တယ်လို့မထင်ပါဘူး။ ငါ့ကိုဘာမှမမေးမြန်းဖို့အခမဲ့ခံစားရသည်။
ပြင်ဆင်ရန်: နံပါတ်အကြောင်းရင်းတစ်ခု, 4th အပိုဒ်၌မတဦးတည်းအကြောင်းပြချက်
LINK - 100 ရက်ပေါင်း: ဘုန်းတော်ကြီး mode ကို။